ချက်ပြုတ်သူ, တိုတောင်းသောအမိန့်ကိုယောဘဖျေါပွခကျြ / Functions များနှင့်တာဝန်ခံနမူနာ - JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / ချက်ပြုတ်သူ, တိုတောင်းသောအမိန့်ကိုယောဘဖျေါပွခကျြ / Functions များနှင့်တာဝန်ခံနမူနာ
ချက်ပြုတ်သူ, တိုတောင်းသောအမိန့်ကိုယောဘဖျေါပွခကျြ / Functions များနှင့်တာဝန်ခံနမူနာ
ယာကုပ် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized မှတ်ချက် Leave 682 views
ရုံတစ်အမြန် prep ကာလလိုအပ်ကြောင်းအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောအစားအစာ Make နှင့် toorder ချက်ပြုတ်. တောင်းဆိုမှုများကိုစားပွဲသို့မဟုတ်ကောင်တာမှာစျေးဝယ်ခြင်းနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုကိုစားသုံးသူထံမှမေလတွင်ယူနေကြတယ်.
စင်ကြယ်သောအစာကို-ပြင်ဆင်မှုထုတ်ကုန်, အလုပ်တည်နေရာ, နှင့်ကောင်တာသို့မဟုတ်စားပွဲ.
ကင်နဲ့ကြော်အစားအစာများ-ထိုကဲ့သို့သောထိုကဲ့သို့သောအမျိုးအနွယ် fries အဖြစ်, နှင့် pancakes pancakes.
ဟမ်ဘာဂါဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်အမဲသား BBQ နှင့်ယူ, ခုတ်ခြင်းနှင့်အသားကင်များအပါအဝင်.
မီးဖိုချောင်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ Restock, စားသောက်ကုန်လှည့်, ရေခဲသေတ္တာထဲမှာအစားအစာပေါ်နှင့်တံဆိပ်ခေါင်းများအချိန်နှင့်ရက်စွဲကို.
အစားအသောက်ပြင်ဆင်မှုအလုပ်အကိုင်များ execute, ဥပမာအားပေါင်မုန်သို့မဟုတ်အချိုပွဲချက်ပြုတ်, အသားအောင်, ဝက်အူချောင်းသို့မဟုတ်ဟင်းချိုထုတ်လုပ်, အဆောက်အဦအသားညှပ်ပေါင်, နှင့်ကော်ဖီသို့မဟုတ်လက်ဖက်ရည်ပြင်ဆင်နေ.
Active ကို-နားထောင်ခြင်း-ရန်အခြားလူတစျခုလုံးကိုအာရုံစူးစိုက်မှုကိုတင်ပြဟုအဘယ်သို့, အသေးစိတ်နားလည်ရန်အချိန်နှင့်စွမ်းအင်ယူပြီးထုတ်လုပ်လျက်ရှိ, သင့်လျော်သောအဖြစ်မေးမြန်းမေးမြန်းချက်, နှင့်မလျော်ကန်ဖြစ်ကြောင်းအချိန်များတွင် mesmerizing မဟုတ်.
အောင်မြင်စွာ data တွေကိုဝေမျှဖို့အခြားသူများအားဆက်သွယ်-Talking.
သို့ချဉ်း ကပ်. -အလုပ်သင်ယူခြင်းနှင့်တိကျသောအခွအေနနည်းပြသို့မဟုတ်တဲ့အခါမှာလတ်ဆတ်သောအရာတို့ကိုနားလည်သဘောပေါက်ဘို့သင့်လျော်သော instructionORinstructional နည်းစနစ်များနှင့်ကုသကောက်နေ.
ကိုယ့်ကိုယ်ကို၏စောင့်ကြည့်ခြင်း-CheckingORDiscovering စွမ်းဆောင်ရည်ကို, သည်အခြားပုဂ္ဂိုလ်များ, သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများသည်တိုးမြှင့်မှုများ generate သို့မဟုတ်ကုစားလုပ်ရပ်များစဉ်းစားရန်.
လူမှု othersI တုံ့ပြန်မှုမသိအမြင်-ဖြစ်ခြင်းနှင့်သူတို့ကျင့်သောကြောင့်သူတို့ပြုမူအဘယ်ကြောင့်နားလည်နိုင်မှုရှိစေရန်.
အခြားသူများစပ်လျဉ်း Dexter-ပြောင်းခြင်းလုပ်ရပ်များ’ အစီအမံ.
ရှေးရှေးအထောက်အကူပြုဖို့ချဉ်းကပ်မှုရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေ Service ကိုအရှေ့တိုင်းဆန်-ကွိုးစား.
ရှုပ်ထွေးသောပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်-ကိုစူးစမ်းအဆင့်မြင့်ပြဿနာများနှင့်ချိတ်ဆက် data တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ကုစားအကောင်အထည်ဖော်ရန်.
လုပျထုံးလုပျနညျးအကဲဖြတ်-လေ့လာတဲ့ item လိုအပ်ချက်များကိုနှင့် layout ကိုအောင်လိုအပ်ပါတယ်.
installation-Installing tools များ, ထုတ်ကုန်, ဝါယာကြိုးများ, သတ်မှတ်ချက်များတက်တွေ့ဆုံရန်သို့မဟုတ်အစီအစဉ်များ.
မတူညီတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းပြချက်များအတွက် programming-ရေးသားကွန်ပျူတာ applications များ.
စစ်ဆင်ရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး gauge, ဘူးသီး, သို့မဟုတ်အခြားရောဂါလက္ခဏာတွေဟာစက်မှန်မှန်ကန်ကန်လည်ပတ်နေသည်သေချာဖြစ်.
သည့်အခါပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် upkeep ကို Maintenance-ပွုလုပျခွငျးနှင့်အဆုံးအဖြတ်.
လိုအပ်သော tools တွေကိုအသုံးချဖို့ပြုပြင်-ကိုပြုပြင်တာတွေအစီအစဉ်များသို့မဟုတ်မော်ဒယ်များ.
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးသုတေသန-ဖျော်ဖြေပစ္စည်းများစာမေးပွဲနှင့်စစ်ဆေးမှုများ, န်ဆောင်မှုများ, သို့မဟုတ်ဖြစ်စဉ်များလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူသို့မဟုတ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မှ.
အာဏာရဆုံးနဲ့သင့်လျော်တဲ့သောတဦးတည်းကိုရှာဖွေဖို့နှိုင်းယှဉ်အခကြေးငွေနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. ကြီးသောအမှုတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ဆုံးဖြတ်ချက်-Making-ရိုက်ယူခြင်း.
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်စနစ်များ program တစ်ခုအလုပ်လုပ်သင့်တယ်ဘယ်လိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ-ကိုစူးစမ်းနှင့်မည်သို့ချိန်ညှိ, အခွအေန, နှင့်လေထုရလဒ်များထိခိုကျနိုငျ.
systems စွမ်းဆောင်ရည်၏ခြေလှမ်းများသို့မဟုတ်ညွှန်းကိန်းအားသုံးသပ်ခြင်း-ကိုစူးစမ်းခြင်းနှင့်လည်းမြှင့်တင်ရန်အလေးအနက်ထားလိုအပ်လှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ်တိကျမှန်ကန်ထိရောက်မှု, အဆိုပါစနစ်၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အညီ.
Timemanagement-စီမံခန့်ခွဲအခြားသူတွေ’ ကာလနှင့် oneis ကိုယ်ပိုင်အချိန်.
ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်များ-ရယူနှင့်ထူထောင်မှု၏သင့်လျော်သောအသုံးပြုမှုကိုဦးတည်စောင့်ကြည့်၏ကြီးကြပ်မှု, devices များ, နှင့်အရင်းအမြစ်များအထူးသဖြင့်အလုပ်လုပ်ဖို့အလေးအနက်ထားလိုအပ်.
ဝန်ထမ်း၏ကြီးကြပ်မှုတွန်းအားပေးအရင်းအမြစ်များ-ထူထောင်, သူတို့လုပ်ဆောင်နေချိန်မှာလူတွေဦးဆောင်, ကြောင်းအလုပ်အကိုင်များအတွက်အကောင်းဆုံးကလူကိုဖျောထု.
အကြီးတန်းကျောင်းဒီပလိုမာ (GED သို့မဟုတ်အကြီးတန်း High School တွင်ညီမျှသောအရည်အချင်းသို့မဟုတ်)
Link ကိုဖွင့်ပမာဏ (သို့မဟုတ်အခြား 2-နှစ်ဇာတ်စင်)
ဇွဲ – 82.50%
ကြိုးစားအားထုတ်မှု – 79.37%
အာဏာ – 83.29%
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း – 90.57%
အခြားသူများနှင့် ပတ်သက်. ပြဿနာ – 80.35%
လူမှု Alignment – 86.47%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 83.97%
စိတ်ဖိစီးမှု Threshold – 79.92%
မှီခို – 90.64%
အနက်ပေါ်အာရုံစူးစိုက် – 84.62%
ရိုးသားခြင်း – 81.21%
လွတ်လပ်ရေး – 78.46%
သစ်လွင်မှု – 73.32%
analytical အတွေးအခေါ် – 70.28%
grade, အမျိုးမျိုး, သို့မဟုတ် sizing အားဖြင့်မြေတပြင်လုံးနှင့်အခြားလယ်ယာကုန်ပစ္စည်းကြောင်းအစားအစာများရွှေ့, အလေးချိန်ပေါင်, …